Kukhona izindlela lapho kanyekanye ngcono lipid kanye carbohydrate umzimba, eqeda hypoxia ngenxa lenyuka-mpilo abatholako kwezicubu, ezizokhuthaza ukukhiqizwa kwama-hormone i-nezindlala adrenal, kwandisa umthamo creatine phosphate futhi glycogen e isibindi futhi ine umphumela lipotropic futhi detoxifying. Kulesi sihloko sizogxila "calcium pangamat".
Imininingwane kawonkewonke kanye izidakamizwa
"Calcium pangamate" inhlanganisela usawoti calcium ka pangamic acid (vitamin B15), gluconate , i-calcium chloride.
Kusho ekhiqizwa ngesimo powder kanye amaphilisi, futhi vitamin-izidakamizwa. Gcina kufanele kube ezingeni lokushisa 18 degrees Celsius esitsheni uvalwe waqiniswa.
Shelf-ukuphila izidakamizwa kusukela ngosuku umkhiqizo engu-2.
Khishiwe "calcium pangamat" ngaphandle kadokotela.
Kukuziphi izimo lapho zisebenzisa "Calcium pangamat"? Izinkomba ukusetshenziswa ebalulwe imiyalelo izidakamizwa, ukuhlinzekela kulezi zimo ezilandelayo:
EBukhoneni isifo senhliziyo, obliterative sclerosis izitsha nemilenze engezansi izigaba lokuqala nelesibili, ukuqina kwamathishu palsy.
Lapho pnevmoskleroze, inyumoniya, emphysema kwamaphaphu.
Ephambi kwezinduna isifo sesibindi esingelapheki kubantu abangamaphesenti ngesimo sokuqala isifo sokusha esiteji kanye ne-hepatitis ezingamahlalakhona.
Phakathi ushevu ne organic chlorine-aqukethe compounds, izidakamizwa noma uphuzo oludakayo.
Esimeni aortitis syphilitic nge esingamahlalakhona senhliziyo besigaba sesibili, kanye tabid okuqhubekayo optic nerve yoma.
Phakathi dermatitis nomzimba, psoriasis, eczema, urticaria, neurodermatitis, toksidermii, pruritus.
Ngaphandle "calcium pangamate" lungasetshenziswa njengendlela agent detoxifying ekuthuthukiseni tolerability izidakamizwa iziguli ngesikhathi yokwamukela antibiotic tetracycline, futhi sulfonamides, futhi corticosteroids. Kwatholakala igazi glucose-ukwehlisa umphumela we-ejenti ngesikhathi sikashukela.
I Izimo eziyinhloko ukusetshenziswa kwezidakamizwa "calcium pangamate" kukhona hypersensitive yokubakhona abamelwe yayo, umfutho ophakeme wegazi kubalulekile futhi glaucoma.
Imiphumela engemihle ingase ukuzibonakalisa ngesimo komzimba.
izidakamizwa Imiphumela ukweqisa izidakamizwa ezingazange wahlola.
"Calcium pangamat": yokusetshenziswa
I umthamo wansuku zonke incike yobudala isiguli kanye nesifo sakhe.
Njengomthetho, kungokwenduduzo abadala 100-300 mg, kuyilapho kufanele ihlukaniswe izigaba eziningana (2-4).
Izingane ezingaphansi izimali iminyaka 3 esekhule ngokwanele ukuba 50 mg ngosuku, kusukela 3 kuya eminyakeni 7 - 100 mg, kusukela mhlaka 7 kuya 14 - 150 mg. Kulokhu, imithi oyinikiwe kuyoba kusuka 20 kuya 40 izinsuku, futhi ngemva kwezinyanga 2-3 ikhefu Kungenzeka ukuthi udinge ukuphinda ke.
"Calcium pangamate" ingasetshenziswa njengesilwane izindlela ezimele, futhi lihambisana namanye amalungiselelo ezithaka imithi. Ngesikhathi esifanayo, naphezu ukutholakala kwayo kanye kalula yokusetshenziswa, akudingekile ukuzithiba medicate. Ngaphambi kokusebenzisa imithi kufanele babonane nodokotela.
Cishe zonke izidakamizwa zingenye omqondofana. Kube khona ngaphandle futhi "Calcium pangamat". Analogs kusho ukuthi namuhla edume kunazo - "Kalgam" futhi "Vitamin B15".
Owokuqala uqukethe ukubunjwa yayo glyukanat calcium, i-sodium chloride, ester calcium usawoti ka gluconic acid , futhi dimethylglycine. Umuthi itholakala ifomu tablet. Kusebenza "Kalgam" njengoba therapy adjunct ngokuvamile ekwelapheni izifo ezifana ukuqina kwemithambo yegazi ka emikhawulweni ephansi, nesifo esingamahlalakhona senhliziyo, i-cerebral semithambo sclerosis ne-emphysema, cystic yamaphaphu, isifo sokusha kwesibindi kohlobo futhi ezingalapheki utshwala ukudakwa, futhi esikhunjeni Izifo Venereal. Njengoba singabona, nomkhakha we isinyathelo ibanzi ukuthi we umkhiqizo main - "Calcium pangamate".
Isakhi esiyinhloko ekulungiseleleni "Vitamin B15" kuyinto pangamic acid. Sebenzisa amathuluzi amacala efanayo "calcium pangamat", ngakho mina ngeke ukuphinda. Yekuchumana Kudingeka sigxile kuphela engemihle. "Vitamin B15" kungabangela Ukuwohloka impilo, ikhanda, ukuqwasha, ukucasuka, tachycardia kanye arrhythmia kwasebekhulile.
Kuhle Amavithamini American: uhlu lwamagama